Bit By Bit - Sava lalana - 1.2 Tonga soa eto amin'ny nomerika taona
Ny taona nomerika dia na aiza na aiza, dia ny mitombo, ary miova ny zavatra azo atao ho an'ny mpikaroka.
Ny foibe horaisintsika amin'ity boky ity dia ny vanim-potoana nomerika vaovao miteraka fikarohana fahafahana ara-tsosialy. Mpikaroka afaka mitandrina ny fitondran-tena, mametraka fanontaniana, mihazakazaka fanandramana, ary miara-miasa amin'ny fomba maro izay sarotra tsotra izao ao amin'ny tena lasa vao haingana. Miaraka amin'ny fahafahana vaovao ireo ihany koa ny loza ho tonga vaovao; mpikaroka afaka manisy ratsy ny olona amin'ny fomba maro izay azo amin'ny tena lasa vao haingana. Ny loharanon'ny ireo fahafahana sy ny loza mety hitranga dia ny tetezamita avy amin'ny Analog taona ny taona nomerika. Io tetezamita no tsy mitranga indray mandeha-toy ny hazavana-jiro fihodinana on-ary, raha ny marina, ny tetezamita no tsy mbola tanteraka. Saingy, noho io hevitra io no efa nahita ampy ny mahafantatra fa zavatra lehibe mitranga.
Ny fomba iray mba mahamarika io tetezamita dia ny hitady fiovana eo amin'ny fiainana andavanandro. Maro ny zavatra eo amin'ny fiainanao izay nampiasaina mba ho Analog dizitaly izao. Angamba ianao taloha hampiasa ny fakan-tsary miaraka amin'ny horonan-tsary, ary ankehitriny dia mampiasa ny fakan-tsary nomerika (izay angamba ny nomerika anatin'ny finday). Angamba ianao zatra mamaky ny gazety ara-batana ary ankehitriny mamaky gazety an-tserasera. Angamba ianao ampiasaina mba handoavana ny zavatra ara-batana vola ary ankehitriny ianao mandoa amin'ny carte de crédit. Amin'ny tranga tsirairay, ny tetezamita avy amin'ny Analog ho niomerika dia midika fa mila fanazavana fanampiny dia ankehitriny voasambotra sy notehirizina nomerika.
Raha ny marina, rehefa nijery tao aggregate, ny vokatry ny ny tetezamita dia mahagaga. Ny habetsaky ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao tsy mitsaha-mitombo haingana dia haingana kokoa izany fanazavana dia voatahiry nomerika, izay manamora fanadihadiana, fifindran'ny, ary Nampitambatra (Sary 1.1) (Hilbert and López 2011) . Izany rehetra izany no tonga nomerika vaovao nantsoina hoe "lehibe angona." Ankoatra izany fipoahan'ny nomerika tahirin-kevitra, dia misy mitovy ny fitomboana eo amin'ny fidirana amin'ny computing fahefana (Sary 1.1) (Hilbert and López 2011) . Ireo fironana-mitombo vaovao nomerika sy mitombo Asehoy computing-tsy famantarana ny lasa miadana kokoa.
Sary 1.1: Information fitehirizana sy ny fahaiza-computing Mitombo hery be. Ankoatra izany, ny vaovao fitehirizana ankehitriny efa ho afa-nomerika (Hilbert and López 2011) . Ireo fiovana mamorona mampino fahafahana mpikaroka ara-tsosialy.
Fa ny tanjona ny fiaraha-monina fikarohana, Mino aho fa ny manan-danja indrindra mampiavaka ny vanim-potoana nomerika dia solosaina na aiza na aiza. Nanomboka toy ny trano-salantsalany milina izay ihany no misy ny fanjakana sy ny orinasa lehibe, ordinatera efa foana mitakemotra ny habeny sy ny mitombo amin'ny malaza. Tsirairay folo taona nanomboka tamin'ny taona 1980, dia efa nahita karazana computing vaovao mipoitra: solosaina manokana, solosaina, marani-tsaina finday, ary ankehitriny miorim-paka tsara processors (izany hoe, ao anaty solosaina ny fitaovana toy ny fiara, miambina, ary thermostats) (Waldrop 2016) . Hatrany ireo solosaina ubiquotous manao kajy fotsiny; izy ireo ihany koa ny mahatsapa, fivarotana, ary mamindra vaovao.
Fa ny mpikaroka, ny fiantraikan'ny ordinatera na aiza na aiza dia mora ny mahita an-tserasera, ny tontolo iainana izay tanteraka norefesiny sy tompon'andraikitra manoloana fanandramana. Ohatra, fivarotana an-tserasera dia afaka mora foana mampino marina hanangona angon-drakitra momba ny fiantsenana sy ny fividianana fomba an-tapitrisany ny mpanjifa. Ankoatra izany, fivarotana an-tserasera dia afaka mora foana randomize mpanjifa sasany mba handray iray miantsena traikefa sy ny hafa mba hahazo iray hafa. Izany fahafahana randomize amin'ny tampon'ny ampy midika fa fivarotana an-tserasera afaka mihazakazaka foana randomized fanandramana. Raha ny marina, raha nividy hatramin'izay na inona na inona avy amin'ny fivarotana an-tserasera ny fitondran-tena efa fantarina ary ianao efa azo antoka fa efa nisy mpandray anjara amin'ny fanandramana, na fantatrao izany na tsia.
Zavatra tsy tanteraka-norefesiny--randomizable tanteraka izao tontolo izao dia tsy mitranga aterineto fotsiny; dia mitombo hatrany ny mitranga eny rehetra eny. Ara-batana fivarotana efa manangona tahirin-kevitra tena tsipiriany fividianana, ary izy ireo foto-drafitrasa-dalam-pandrosoana mba hanara-maso mpanjifa miantsena fitondran-tena, ary afangaro fanandramana ho fahazarana manao raharaham-barotra. Amin'ny teny hafa, rehefa mieritreritra momba ny nomerika taona tokony tsy hieritreritra-tserasera, dia tokony hieritreritra na aiza na aiza. Digital taona fikarohana fiaraha-monina ny olona dia anjara tanteraka fifandraisany amin'ny sehatra nomerika ary anjara ny olona mampiasa fitaovana nomerika ao amin'ny tontolo ara-batana.
Ankoatra ny manampy ny fandrefesana ny fitondran-tena sy ny randomization ny fitsaboana, ny nomerika taona ihany koa nanampy fomba vaovao ho an'ny olona mba hifandraisana. Ireo karazana fifandraisana vaovao mamela mpikaroka mba mihazakazaka vaovao fanadihadiana sy ny hamorona faobe ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa aminy sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny.
Mety A be fisalasalana milaza fa tsy misy fahaiza-manao ireny no tena vaovao. Izany hoe, tamin'ny lasa, dia efa nisy fandrosoana lehibe hafa ao amin'ny firenena 'fahaiza-manao mba hifandray (ohatra, The Telegraph (Gleick 2011) ), ary ordinatera no nahazo haingana amin'ny mitovitovy toy izany koa ny tahan'ny hatramin'ny taona 1960 (Waldrop 2016) . Saingy, inona izao no tsy ampy be fisalasalana dia hoe Rehefa nandeha ny fotoana bebe kokoa izany dia lasa zavatra hafa (Halevy, Norvig, and Pereira 2009) . Ity misy fampitahana izay tahaka. Raha afaka hisambotra sary ny soavaly, dia manana sary. Ary, raha afaka hisambotra 24 sarin'ny soavaly iray isan-tsegondra, dia manana sarimihetsika. Mazava ho azy, sarimihetsika fotsiny ny bunch ny sary, fa ny ho faty ho mafy be fisalasalana milaza fa sary sy sarimihetsika dia mitovy.
Mpikaroka ao amin'ny dingana ny fanaovana ny tetezamita mitovy ny tetezamita avy amin'ny sary ho cinematography. Io tetezamita tsy midika hoe ny zava-drehetra nianarantsika tamin'ny lasa dia tokony ho tsinontsinoavina. Toy ny fitsipiky ny sary mampahafantatra ny fitsipiky ny cinematography, ny fitsipiky ny fiaraha-monina fikarohana tamin'ny lasa dia mampahafantatra ny fiaraha-monina fikarohana ny amin'ny hoavy. Nefa, ny tetezamita ihany koa dia midika fa tsy tokony hanohy hanao toy izany. Kosa, dia tsy maintsy hanambatra ny manakaiky ny lasa sy ny fahaiza-manao ny ankehitriny sy ny ho avy. , Ohatra, ny fikarohana ny Blumenstock sy mpiara-miasa dia mifangaro ny nentim-paharazana fanadihadiana fikarohana ny zavatra sasany mety hoe angona siansa. Roa ireo sakafo dia ilaina; ary tsy ny fanadihadiana valinteny na ny telefaonina rakitsoratra nitokana dia ampy. More ankapobeny, heveriko fa mpikaroka ara-tsosialy hatrany dia mila manambatra ny siansa ara-tsosialy miaraka amin'ny angon-drakitra siansa, mba hanararaotra ny fahafahana ny nomerika taona. Hanohy ihany no naka sary rehefa afaka fanaovana sarimihetsika ihany koa dia mety ho fahadisoana.